कस्तो केशलाई कस्तो स्याहार ? - सौन्दर्य - प्रकाशितः आश्विन १५, २०७५ - नारी
उनले विभिन्न कट, ब्लो ड्राई स्टाइलहरू, पुराना किसिमका ब्याक कम्व लुक आदिको परिचय दिँदै हेयर ड्रेसिङको अवधारणालाई नयाँ रूप दिए । त्यसपछि ट्रेभोर सर्वीले आफ्नो भिजनरी कट र दि व्ट्ज, दि चप, ओल्फ म्यान तथा दि सिरन्च प्रविधि समावेश गरी केश शृंगारमा नयाँ क्रान्ति ल्याए ।
त्यससँगै मानिसहरू सैलुनमा पुगेर केश काट्न, पखाल्न तथा सेट गर्न थालेको पाइन्छ । हेयर स्टाइलिङ कलालाई आजको फेसन उद्योगले आफ्नो अभिन्न अङ्ग मानिसकेको छ । केश सज्जाको कला फेसनकै एउटा अंग हो । के तपाईंसँग केश सजाउने समय छ ? के तपाईंसँग केशको हेरचाह गर्ने र त्यसलाई स्टाइल दिने समय र रुचि छ ? यी कुरामा ध्यान दिएर केश सज्जातर्फ लाग्नुपर्छ ।